Koulibaly oo ka hadlay codsiyada faraha badan ee soo gaaraya xilli uusan hilmaamin midab takoorkii lagu sameeyay – Gool FM
(Napoli) 16 Feb 2019. Daafaca kooxda Napoli iyo xulka Senegal Kalidou Koulibaly ayaa soo dhoweeyey codsiyada badan ee soo gaaraya oo ay usoo gudbinayaan kooxaha ugu waaweyn Yurub oo mid waliba dooneyso inay la soo wareegto.
Wareysi uu Koulibaly maanta siiyay ‘Rai Sport’ ayaa waxa uu xusay in uusan waqti xaadirkan dooneyn in uu ka hadlo mustaqbalkiisa oo markaa doonayn inay xiisadi ku kacdo, laakiin wuxuu sheegay inuu ku farxay wararka sheegaya in la soo dalbaday.
“Mustaqbalkayga?, ma garanayo in aan weli ka mid ahay daafacyada ugu xooggan, mar walba waxaan isku dayayaa in aan intii karaankayga ah soo bandhigo, maadaama aan halkan ku suganahay waxaan mar walba isku dayaa inaan kobciyo Napoli, dhiirri gelin badan ayaan haystaa, waxaana doonayaa in aan arrintani sii wado” ayuu yiri Koulibaly.
Kooxaha doon doonaya Koulibaly oo 27 jir ah waxaa ugu cad cad Manchester United oo indha indheeyayaal u dirsatay xidiggan oo ka mid ah daafacyada dhexe ee ugu wanaagsan kubadda cagta, waxaana Man U ay doonaysaa in ay soo iibsato Koulibaly xagaagani marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga.
Dhanka kale Koulibaly ayaa weli xusuusan midab takoorkii ay ku sameeyeen taageerayaasha Inter oo ugu mar ugu yeeray Daanyeer ciyaar ay dhammaadkii 2018 wada yeesheen Napoli iyo Inter oo 1-0 ay ku adkaatay Inter, waxaana dhici karta in uu qiimeynayo codsiyada soo gaaraya balse uusan rabin in uu carrabka ku dhufto, maadaama uu ka daalay Horyaalka midab takoorka badan ee Serie A-da.